Izicelo Zabahleli Behholo | I-Ota Ward Cultural Promotion Association
Ukuvikela ukusabalala kokutheleleka okusha kwe-coronavirus, sicela umhleli ukuthi aqonde futhi abambisane nalezi zinto ezilandelayo lapho usebenzisa lesi sikhungo.
Ngaphezu kwalokho, uma usebenzisa lesi sikhungo, sicela ubheke imihlahlandlela eyenziwe yiqembu ngalinye lomkhakha bese ucela ukuqonda kwakho nokubambisana ekuvimbeleni ukusabalala kwesifo esisha se-coronavirus.
Uhla lwemikhombandlela yokuvikela ukusabalala kwezifo ngemboni
Ukulungiswa kwangaphambili / umhlangano
Umhleli uzoba nomhlangano nesikhungo maqondana nemizamo yokuvimbela ukusabalala kwesifo ngesikhathi sokufaka isicelo sokusetshenziswa esikhungweni noma ngesikhathi semihlangano yangaphambilini.
Ekwenzeni lo mcimbi, sizothatha izinyathelo zokunqanda ukusabalala kwesifo ngokuya ngemikhombandlela yomkhakha ngamunye, futhi siqondise ukuhlukaniswa kwezindima phakathi komgqugquzeli nendawo leyo.
Sicela usethe ishejuli yokuphana yokulungiselela, yokuzijwayeza nokususa.
Sicela usethe isikhathi sekhefu nesikhathi sokungena / sokuphuma nesikhathi esiningi.
Ngemicimbi ebandakanya ukuhamba kwabantu ezweni lonke (imihlangano kazwelonke, njll.) Noma imicimbi enabahlanganyeli abangaphezu kwe-1,000 2, iCrisis Management Coordination Section, iDisaster Prevention Management Division, Comprehensive Disaster Prevention Department, Tokyo, kufanele kubhekwane nayo cishe amasonto amabili ngaphambi Usuku lomcimbi. Sicela wenze ukubonisana kwangaphambilini (thumela iphepha lomcimbi ngaphambi kokubonisana).
Uma ufuna ukusebenzisa ihholo ngaphansi kokusebenzisa imibandela yokunciphisa, sicela uthumele okufakiwe "Isiqinisekiso maqondana nokuqaliswa kwezinyathelo zokuvimbela ukusabalala kwesifo esisha se-coronavirus" okungenani izinsuku eziyi-10 ngaphambi komcimbi.Sicela wazi ukuthi uma ungahambisi, ungahle ungakufanelekeli ukuphumula.
Isiqinisekiso maqondana nokuqaliswa kwezinyathelo zokuvimbela ukusabalala kokutheleleka okusha kwe-coronavirus (Aprico)
Isiqinisekiso maqondana nokuqaliswa kwezinyathelo zokuvimbela ukusabalala kwezifo ezintsha ze-coronavirus (Plaza)
Isiqinisekiso maqondana nokuqaliswa kwezinyathelo zokuvimbela ukusabalala kwezifo ezintsha ze-coronavirus (Cultural Forest)
Mayelana nokwabiwa kwezihlalo (indawo yokuhlala)
Njengomthetho ojwayelekile, izihlalo kufanele zigcinelwe abahlanganyeli ukuze umhleli akwazi ukuphatha nokulungisa isimo sokuhlala.
Ngemuva kokuthatha ngokuphelele izindlela zokulawula ukutheleleka njengokugqoka imaski nokucindezela ukusebenza kwezwi nokunaka komuntu ngamunye ngumhleli, izinga lokuhlala lizoba phakathi kwama-50% omthamo.
Emidlalweni okulindeleke ukuthi ihanjelwe yinqwaba yabantu asebekhulile nabantu abanezifo ezingalapheki, kunengozi enkulu yokuhlukunyezwa uma kwenzeka ukutheleleka, ngakho-ke ngicela ucabangele ukuthatha izinyathelo ezinakekela kakhulu.
* Ukuphathwa kwezihlalo zerowu langaphambili: Empeleni, izihlalo zomugqa wangaphambili azikwazi ukusetshenziswa ukuqinisekisa ibanga elanele ukusuka ngaphambili kwesiteji (ibanga eliqondile lamamitha amabili noma ngaphezulu).Uma lokho kunzima, thatha izinyathelo ezinomphumela ofanayo nokugcina ibanga, njengokugqoka isihlangu sobuso.Sicela uxhumane nesikhungo ukuthola imininingwane.
Izindlela zokuvimbela ukutheleleka ezinhlanganweni ezihlobene nabadlali
Umgqugquzeli nezinhlangano ezihlobene nazo ziyacelwa ukuthi zenze imizamo yokuvimbela ukutheleleka ngangokunokwenzeka, njengokuthatha isikhawu esanele phakathi kwabadlali esinesiqondiso okungenani esingu-XNUMX m, kuya ngohlobo lwesisho.Bona imihlahlandlela yemboni ukuthola eminye imininingwane.
Ngaphandle kwabadlali, sicela ugqoke imaski bese ubulala amagciwane ezandleni zakho esikhungweni.
Ezindaweni lapho inani labantu elingacacisiwe lingathinta kalula, njengamakamelo okugqoka kanye namagumbi okulinda, faka isixazululo sokubulala amagciwane se-sanitizer yesandla kanye ne-disinfect njalo.
Igumbi lokugqoka kufanele libe phakathi kwama-50% wesibalo esiphezulu sabantu ukugwema ukuminyana.
Ukudla nokuphuza kule ndawo akuvunyelwe ngokomthetho.Noma kunjalo, i-hydration ivunyelwe ukugcina impilo enhle. (Awungeke udle noma uphuze ezihlalweni zehholo).
Khetha umuntu ophatha okokusebenza, okokusebenza, amathuluzi, njll., Futhi ukhawulele ukwabelana ngabantu abangacacisiwe.
Ngaphezu kwalokho, sicela uthathe izinyathelo ezanele zokuvimbela ukutheleleka ekwenzeni / ukwenza, ukulungiselela / ukususa, njll.
Uma usola ukuthi kunalesi sifo, bika esikhungweni ngokushesha bese usivalela wedwa esiteshini sosizo sokuqala esibekiwe.
Izindlela zokuvimbela ukutheleleka kwabahlanganyeli
Ababambiqhaza bayacelwa ukuba balinganise izinga lokushisa ngaphambi kokuza endaweni, futhi sicela baziswe ngokugcwele kusengaphambili ngamacala lapho bezocelwa ukuthi bangafiki endaweni.Uma kunjalo, sicela uthathe izinyathelo ezifana nokudluliswa kwamathikithi nokubuyiselwa imali kuya ngesimo ukuze ababambiqhaza bangabi sengozini ngangokunokwenzeka futhi nokwamukelwa kwabantu abanezimpawu kungavinjelwa nakanjani.
Hhayi ukuzilinganisela kwabahlanganyeli kuphela, kepha futhi nomgqugquzeli kufanele athathe izinyathelo ezinjengokulinganisa izinga lokushisa lapho engena endaweni.Umhleli ucelwa ukuthi alungiselele imishini yokulinganisa izinga lokushisa (i-thermometer engathintani, i-thermography, njll.).Uma kunzima ukulungiselela, sicela uxhumane nesikhungo.
Lapho kunomkhuhlane omkhulu uma kuqhathaniswa nokushisa okuvamileUma (*) noma enye yalezi zimpawu ezilandelayo isebenza, sizothatha izinyathelo njengokulinda ekhaya.
Izimpawu ezinjengokukhwehlela, i-dyspnea, i-malaise ejwayelekile, umphimbo obuhlungu, ukuphuma kwamakhala / ukuminyana kwempumulo, ukunambitheka / ukuphazamiseka kwe-olfaction, izinhlungu ezihlangene / zemisipha yenyama, isifo sohudo, ukuhlanza, njll.
* Isibonelo sezinga elithi "lapho kunokushisa okuphezulu kunokushisa okujwayelekile" ... Uma kunokushisa okungu-37.5 ° C noma ngaphezulu noma okungu-XNUMX ° C noma ngaphezulu kokushisa okujwayelekile
Ukugwema ukuminyana lapho ungena futhi uphuma, sicela ugcine ibanga elanele (ubuncane be-XNUMXm) ngokungena nokuphuma ngesibambiso sesikhathi, ukuthola izinkomba, nokwabela abasebenzi.
I-buffet izovalwa okwamanje.
Sicela usethe isikhathi esanele sokuphuma kusengaphambili bese uyalela ophumayo ngesibambiso sesikhathi sendawo ngayinye yendawo.
Sicela uyeke ukulinda noma ukuvakashela ngemuva kokusebenza.
Sicela uzame ukuqonda amagama nolwazi lokuxhumana oluphuthumayo lwabahlanganyeli ngokusebenzisa uhlelo lwamathikithi.Ngaphezu kwalokho, ngicela wazise ababambiqhaza kusenesikhathi ukuthi leyo mininingwane inganikezwa ezikhungweni zikahulumeni ezifana nezikhungo zezempilo zikahulumeni lapho kudingeka, njengalapho umuntu othelelekile evela kubahlanganyeli.
Sicela usebenzise ngenkuthalo isicelo sokuqinisekisa oxhumana nabo (i-COCOA) soMnyango Wezempilo, Ezabasebenzi Nezenhlalakahle.
Kubabambiqhaza abadinga ukucatshangelwa, abantu abakhubazekile, asebekhulile, njll., Sicela ubheke izinyathelo zokuphikisa kusengaphambili.
Uyacelwa ukuthi uphinde unake ekuvikeleni ukutheleleka ngaphambi nangemva kokusebenza, njengokusetshenziswa kwezindawo zokudla nezindawo zokudlela.
Izindlela zokuvimbela ukusabalala kwesifo
Umhleli kufanele axhumane nesikhungo ngokushesha uma kukhona umuntu osolwayo ukuthi uthelelekile bese bexoxa ngempendulo.
Njengomthetho ojwayelekile, umgqugquzeli kufanele alandelele amagama nolwazi lokuxhumana oluphuthumayo lwabantu ababambe iqhaza emcimbini nakubabambiqhaza, futhi agcine uhlu olwenziwe isikhathi esithile (cishe inyanga eyodwa).Ngaphezu kwalokho, sicela wazise abantu ababambe iqhaza kulo mcimbi nababambiqhaza kusengaphambili ukuthi leyo mininingwane inganikezwa ezikhungweni zomphakathi ezifana nezikhungo zezempilo zomphakathi lapho kudingeka.
Ngokombono wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, sicela uthathe izinyathelo ezanele zokugcina uhlu, njll., Futhi ululahle kahle ngemuva kwesikhathi esidlulile.
Sicela uqaphele lapho uphatha imininingwane yabantu abangenwe yigciwane (kufaka phakathi abahlalisanayo, njll.) Okwenzekile, njengoba kuzoba imininingwane yomuntu ebucayi.
Sicela usethe imibandela yokumenyezelwa emphakathini nokusebenza lapho kwenzeka umuntu onegciwane.
Izindlela zokuvimbela ukutheleleka ehholo
Xhumana nezindlela zokuvimbela ukutheleleka
Umhleli kufanele afake i-sanitizer yezandla ezindaweni ezidingekayo njengokungena nokuphuma kwendawo futhi ayihlole njalo ukuze kungabi nokushoda.
Umhleli kufanele njalo abulale amagciwane endaweni lapho kutholakala kalula umphakathi wonkana.Sicela ulungiselele isisombululo se-magciwane ngumgqugquzeli.
Ukuze uvikele ukutheleleka kokuthintana naye, sicela ucabangele ukwenziwa lula kwamathikithi ngesikhathi samukelwa.
Sicela ugweme ukuhambisa amapheshana, amapheshana, imibuzo yemibuzo, njll. Ngangokunokwenzeka.Futhi, uma kungenakugwenywa, qiniseka ukuthi ugqoka amagilavu.
Sicela uyeke ukuxhumana nabantu ababambe iqhaza ekusebenzeni kanye nabahlanganyeli, njengokuvakasha ngemuva kokusebenza.
Sicela uyeke izipho nokufakwa.
Sicela ubeke umkhawulo endaweni ngayinye efinyelelekayo njengabahlanganyeli nezinhlangano ezihlobene (vimbela ababambiqhaza ukuthi bangene egumbini lokugqoka, njll.).
Izinyathelo zokuvimbela ukutheleleka kwamaconsi
Njengomthetho ojwayelekile, ababambiqhaza kufanele bagqoke amaski ngesikhathi somcimbi.
Sicela uthathe izinyathelo zokuvimbela isiminyaminya ngezikhathi zamakhefu nasemnyango / ekuphumeni.
Uma kunabahlanganyeli abenza izwi elikhulu, umhleli kufanele anake ngamunye.
Izindlela zokuvimbela ukutheleleka phakathi kwezinhlangano ezihlobene (ikakhulukazi abadlali) ⇔ ababambiqhaza
Sicela uyeke ukuqondisa lokho kwandisa ubungozi bokutheleleka (ukucela ukuhalalisela, ukukhuphula ababambiqhaza esiteji, ukunikeza abahlanu, njll.).
Sicela uvumele isikhala esanele (ubuncane be-XNUMXm) lapho uqondisa futhi uqondisa ababambiqhaza, futhi gqoka imaski nesihlangu sobuso uma kunesidingo.
Ezikhawuntini ezihlangana nabahlanganyeli (ukwamukela isimemo, izinto zokubala zamathikithi zosuku olufanayo), njll., Faka izingxenye ezifana namabhodi e-acrylic namakhethini e-vinyl asobala ukuze abavikele kubahlanganyeli.
Izindlela zokuvimbela ukutheleleka phakathi kwabahlanganyeli ⇔ ababambiqhaza
Kuphoqelekile ukugqoka isifihla-buso ezihlalweni zabalaleli, futhi sicela uqiniseke ukuthi usigqoka kahle ngokusabalalisa nangokuthengisa kubabambiqhaza abangagqokile futhi unake ngamunye.
Sicela uvumele isikhathi esanele samakhefu nezikhathi zokungena / zokuphuma, ucabangela umthamo namandla endawo, imizila yokungena / yokuphuma, njll.
Sicela ubazise ukuthi kufanele bayeke ukukhuluma ngesikhathi sekhefu nalapho bengena futhi bephuma, futhi ubakhuthaze ukuthi bayeke izingxoxo ubuso nobuso futhi bahlale emabangeni amafushane endaweni yokwamukela izivakashi.
Uma kulindeleke inani elikhulu lababambiqhaza, sicela usebenzise isikhathi esisele sohlobo ngalunye lwethikithi nendawo lapho usuka ezihlalweni zezethameli ngesikhathi sekhefu noma lapho ushiya ukuvimbela ukuma.
Kuzindlu zangasese ngesikhathi sekhefu, ngicela ukhuthaze ukuqondaniswa nendawo eyanele (okungenani u-XNUMXm) ngokubheka usayizi wendawo yokwamukela izivakashi.
Ukudla nokuphuza kule ndawo akuvunyelwe ngokomthetho.Kodwa-ke, i-hydration ivunyelwe ukugcina impilo (awukwazi ukudla noma ukuphuza ezihlalweni zehholo).
Sicela uqedele ukudla kwakho ngaphambi nangemva kokungeniswa ngangokunokwenzeka.
Ngenxa yokusebenzisa isikhungo isikhathi eside, akunakugwenywa ukudla egumbini, kepha sicela uqaphele la maphuzu alandelayo.
Hlala ngendlela engabhekene ubuso nobuso.
Ibanga phakathi kwabasebenzisi kufanele libe okungenani u-XNUMX m.
Gwema ukwabelana ngezinti nezinti phakathi kwabasebenzisi.
Gwema ukukhuluma ngesikhathi sokudla.
Gqoka imaski lapho kungenzeka khona.
Ukuthengiswa kwempahla, njll.
Uma kugcwele, sicela ukhawulele ukungena nokuhlelwa njengoba kudingeka.
Sicela ufake isibulala-magciwane lapho uthengisa impahla.
Abasebenzi ababandakanyeka ekuthengisweni kwempahla kufanele bagqoke amagilavu ​​kanye nezihlangu zobuso lapho kudingeka khona ngaphezu kokugqoka amaski.
Lapho uthengisa izimpahla, sicela ungaphathi ukuboniswa kwemikhiqizo eyisampula noma imikhiqizo eyisampula abantu abaningi abazoyithinta.
Cabanga ukuthengisa ku-inthanethi noma wenze izinkokhelo ezingenamali ukuze unciphise ukuphatha imali ngangokunokwenzeka.
Ukuhlanza / ukulahla udoti
Qiniseka ukuthi ugqoka izifihla-buso namagilavu ​​zabasebenzi abahlanza futhi balahle udoti.
Ngemuva kokuphothula umsebenzi, geza bese uhlanza amagciwane ezandleni zakho.
Sicela uphathe udoti oqoqiwe kahle ukuze ababambiqhaza bangahlangani nawo ngqo.
Sicela uhambe nawo udoti owenziwe ekhaya. (Ukusebenza okukhokhelwayo kungenzeka esikhungweni).